Imisebenzi yezandla eyi-15 enhle nezwakala kalula | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Elizabeth Catalan | 19/11/2021 19:00 | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yezandla yasekhaya
I-Felt iyinto eguquguqukayo kakhulu yokwenza zonke izinhlobo zemisebenzi yezandla emihle, njengoba inokwakheka okuqinile okuyivumela ukuthi iphathwe kahle kakhulu uma uyisika futhi uyithunga uma uyiqhathanisa nendwangu. Ngaphezu kwalokho, ayibizi futhi kulula ukuyithola.
Imisebenzi yezandla ezwayo mihle kakhulu futhi kunemibono eminingi enelukuluku ongayenza futhi ongazijayeza ngayo. Uma ungakazami wazizwa ukwenza imisebenzi yezandla, lezi Imisebenzi yezandla eyi-15 ozokubona ngezansi kungakukhuthaza ukuthi uthathe isinyathelo. Ungaphuthelwa!
1 Izwa ingelosi ngoKhisimusi
3 Izwa imbali yezimbali
4 Isembozo sefu se-Kawaii seselula yakho eyenziwe ngokuzizwa
5 Isongo lesinkanyezi elenziwe ngokuzizwa
6 Isibambi se-napkin esilula kakhulu ukwenza ngokuzizwa
7 Felt iphazili yezingane
8 Isikhwama sepensela esingasindi sasilula
9 Isihluthulelo se-Felt: isilo esibi kodwa esihle
10 Isisekelo sikaKhisimusi esenziwe ngokuzizwa
11 Indlela yokwenza i-cactus ezwakalayo yokuhlobisa
12 Ungenziwa kanjani umgexo ngezimbali ezizwakala. Ubucwebe obulula
13 Felt izimbali ukuhlobisa ubuciko bakho be-DIY
14 I-brooch yezimbali ezwayo
15 Indlela yokwenza izimvemvane ezizwakala
Izwa ingelosi ngoKhisimusi
UKhisimusi uyasondela futhi yisikhathi esihle sokulungiselela yonke imihlobiso yendlu. Futhi ukuveza uhlangothi lwethu lokudala okwengeziwe nokwenza imisebenzi yezandla ngomuzwa osebenza njengomhlobiso ngesandla.
Ngokwesibonelo, lokhu pretty umklamo omise okwengelosi ukulenga esihlahleni sikaKhisimusi, emnyango wangaphambili wendlu noma emashalofini ezincwadi emakamelweni.
Izinto ozozidinga ukwenza lo msebenzi wezandla zinemibala ehlukene ezwakele, inaliti nentambo, isikelo, isibhamu seglue, izikhonkwane, intambo yomsila wegundane, iphepha kanye nepensela. Ngeke kukuthathe isikhathi eside ukuyenza ngoba ilula kakhulu. Eposini Izwa ingelosi ngoKhisimusi uzobona zonke izinyathelo.
Obunye ubungcweti bokuzizwa bokudala futhi obusebenzayo ongayenza yilokhu ukhiye omise okwenhliziyo. Futhi kuyithuba elihle kakhulu lokwenza isipho esihle somuntu okhethekile ngesandla. Noma nje uzenzele wena.
Njengezinto ezisetshenziswayo kuzodingeka ukuthi uthole: ifekthi enemibala emibili, intambo nenaliti, intambo yesikhumba, ifa, isikelo, ama-clasps, ubuhlalu obunemibala, amawasha nomshini wokwenza izimbobo.
Inqubo inzima kancane kodwa uma uyiqeda uzoba ne-keychain epholile ngempela. Ngaphezu kwalokho, njengoba igcina ama-akhawunti, izokusiza ukuthi uthole ngokushesha okhiye esikhwameni sakho. Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuzithola kodwa ngale-keychain ngeke kwenzeke kuwe! Uzothola zonke izinyathelo kokuthunyelwe Felt keychain.
Izwa imbali yezimbali
Lona imbali yezimbali Ngenye yezandla ezinhle kakhulu ezizwakalayo ongazilungiselela ukuhlobisa amakamelo endlu yakho, ikakhulukazi uma kufika usuku oluthile, njengoKhisimusi.
Iningi lezinto ozozidinga ukwenza le garland okungenzeka ukuthi usunayo kakade ekhaya. Anemibala ezwakalayo, isikele, iglue, ipensela kanye nenqwaba yezibani zikaKhisimusi. Uma ungakaze uzizwe, kungenzeka futhi ukwenza lo msebenzi ngerabha ye-eva.
Eposini Izwa imbali yezimbali Uzokwazi ukuthola imiyalelo yokwenza lo msebenzi wezandla omuhle ongahlobisa ngawo indlu.
Uma uthanda izesekeli zeselula futhi uzigqoke ezakamuva, uzothanda ukwenzela ifoni yakho leli kesi nge kawaii ifu design. Ingenye yemisebenzi yezandla ezwakalayo enhle kakhulu futhi uzoba nesikhathi esihle sokuyibumba!
Ukuze wenze leli kesi elihambayo kuzodingeka uqoqe izinto ezilandelayo: i-featured enemibala, irabha ye-eva, izinkanyezi, isikelo, iglue, izimbobo zenjoloba e-eva, izimpawu ezihlala njalo, i-blush ne-cotton swab, irula nepensela.
Uzothola zonke izinyathelo zokwenza lo msebenzi wezandla ojabulisayo kokuthunyelwe Isembozo sefu se-Kawaii seselula yakho eyenziwe ngokuzizwa. Lona umise okwefu kodwa uma uthanda omunye umklamo onjengenkanyezi, ilanga noma inyanga, ungadalula ubuhlakani bakho.
Isongo lesinkanyezi elenziwe ngokuzizwa
Okulandelayo kungomunye wemisebenzi yezandla ezwakalayo okufanele yenziwe nezingane. Imibalabala, imnandi futhi ungayifaka nasesihlakaleni uma uyiqeda: isongo esihle. Bazowuthanda umqondo!
Izinto ozozidinga kulula ukuziqoqa, ukuze ukwazi ukuzithola kalula kunoma iyiphi i-stationery noma i-bazaar. Thatha amanothi: izinkanyezi ezizwakalayo ezinemibala, izinkanyezi ezizwakalayo ezizinamathelayo, irula, ipensela, intambo noma i-velcro, kanye nesisiki sokufa.
Ukuze uthole ukuthi kwenziwa kanjani, ngincoma ukuthi ubheke okuthunyelwe Isongo lesinkanyezi elenziwe ngokuzizwa ngoba kuqoqwe zonke izinyathelo ozodingeka uzithathe.
Isibambi se-napkin esilula kakhulu ukwenza ngokuzizwa
Ingabe uhlela isidlo ekhaya futhi ufuna ukumangaza izivakashi zakho ngendwangu yetafula ekhethekile? Bamangale ngalezi wezwa izindandatho ze-napkin eyenziwe nguwe. Ingenye yemisebenzi yezandla ezwakalayo enhle kakhulu yokuhlobisa itafula futhi ingenye yezinto ezilula kakhulu. Kangangoba nabancane endlini bangakusiza ukuwenza.
Emizuzwini embalwa nje uzoqeda zonke izindandatho ze-napkin! Ukuze uzenze uzodinga lezi zinto kuphela: isikelo, ipensela neshidi eliwusayizi we-DIN A4 ozwakalayo. O, futhi ufunde okuthunyelwe Isibambi se-napkin esilula kakhulu ukwenza ngokuzizwa lapho uzothola khona imiyalelo. Uzoba nesikhathi esihle sokwenza lo msebenzi wezandla owusizo!
Ama-puzzle amathoyizi amahle kakhulu ukuze izingane zithuthukise amakhono azo okuqonda. Lezo ezenziwe ngomuzwa, ikakhulukazi, zilungele ukusebenza ngezinzwa namakhono emoto. Uma ufuna ukumangaza izingane zakho ngethoyizi elisha nelijabulisayo, ngincoma ukuthi wenze lokhu kube nemibala iphazili emise okwebhola.
Ungomunye wemisebenzi yezandla elula ukuwenza. Uzodinga njengezinto zokwakha: indwangu ezwakele yemibala ehlukahlukene, ipensela, isikelo, intambo yokuhlobisa, inaliti ewugqinsi kanye ne-velcro yokunamathela, phakathi kwezinye izinto. Uma ufuna ukuthola ezinye izinto zokusebenza nokuthi lo msebenzi wezandla wenziwa kanjani, ungaphuthelwa okuthunyelwe Felt iphazili yezingane.
Lona omunye wemisebenzi yezandla ezwakalayo kakhulu ongayenza, ngoba i icala lapho ukugcina amapensela. Ilungele izingane ukuya esikoleni ngoba kulula kakhulu ukuyiphatha. Umphumela uminyene kangangokuthi ngeke ukhiphe isikhala kubhaka.
Inqubo yokukhiqiza yaleli cala ilula kakhulu. Kangangoba nabancane bangakusiza ukuthi uyilungiselele ngaphansi kokuqondisa kwakho. Izinto okuzodingeka uziqoqe yilezi: indwangu ezwakele, intambo yokunwebeka, ipensela, i-cutter, irula kanye nenkinobho enkulu. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani ngokuchofoza okuthunyelwe Isikhwama sepensela esingasindi sasilula.
Isihluthulelo se-Felt: isilo esibi kodwa esihle
Amaketango angukhiye angomunye wemisebenzi yezandla ezwakala kakhulu. Afika ngawo wonke amajamo, amasayizi, nemibala. Ngemiyalelo ozoyithola kokuthunyelwe Isihluthulelo se-Felt: isilo esibi kodwa esihle ungakwenza ngokushesha. Kuzoba isipho esihle kakhulu ukunikeza izingane ukuthi zizisebenzise nezikhiye noma zivele zilenga kubhaka.
Njengezinto zokwakha uzodinga ukuzwa kwemibala, izimpawu, izintambo kanye nenaliti yokuthunga, ukugxusha isilo, indandatho yokhiye kanye nezinkinobho (uyazikhethela amehlo). Ngokuphazima kweso uzoba nalokhu ezandleni zakho i-keychain enhle emise okwesilo.
Isisekelo sikaKhisimusi esenziwe ngokuzizwa
Njengoba uKhisimusi ususeduze, ufuna ukuyobheka imisebenzi yezandla emisha ongahlobisa ngayo indlu kulo nyaka. Omunye wabo lokhu kumnandi wazizwa uphakathi ukumangaza izivakashi esidlweni sangaphambi kukaKhisimusi.
Uzothola imiyalelo yokuyenza ngokuchofoza okuthunyelwe Isisekelo sikaKhisimusi esenziwe ngokuzizwa futhi njengezinto zokwakha uzodinga ukuzwa okubomvu, iglue noma i-silicone eshisayo, isikelo, umaka wendwangu, irula, amakhadibhodi, ikhandlela kanye ne-tinsel.
Indlela yokwenza i-cactus ezwakalayo yokuhlobisa
I-Cacti yizitshalo ezinemfashini kakhulu ukuhlobisa izindlu. Kwesinye isikhathi akwenzeki ukuzigcina ekhaya ngoba zinameva futhi izingane noma izilwane ezifuywayo zingahlatshwa yizo. Isixazululo? Uma uthanda i-cacti, ungakwazi njalo ukwenza eyodwa ngokuzizwa. Babukeka bebahle!
Izinto okufanele uzithole yizinzwa eziluhlaza okotshani, intambo emhlophe, amanzi, isikelo, i-wadding, itheyiphu yephepha, imbiza yezimbali nokunye. Ungathola okunye kokuthunyelwe Indlela yokwenza i-cactus ezwakalayo yokuhlobisa, lapho uzothola khona isifundo sevidiyo esinazo zonke izinyathelo ukuze ukwazi ukwenza lo msebenzi wezandla ngejubane lakho.
Ungenziwa kanjani umgexo ngezimbali ezizwakala. Ubucwebe obulula
Uyathanda ukubukisa ngezinsiza ezenziwe ngezandla? Omunye wemisebenzi yezandla yasekuqaleni futhi ejabulisa kakhulu ongayenza ukuze unikeze ukuthinta okuhlukile futhi okuqondene nawe ezingutsheni zakho yilokhu. wezwa umgexo wembali. Umphumela muhle kakhulu ukugqoka kokubili entwasahlobo nasehlobo futhi kuye ngemibala oyikhethayo, ungakwazi futhi ukugqoka ekwindla nasebusika.
Qaphela lezi zinto ukuze wenze lo mgexo omuhle. Uzodinga i-fewling enemibala, isikele, iglu, i-CD, amapharele, amamabula, iketango, ibhande lobucwebe, amaparele, imbali iyafa kanye nokudubula okukhulu. Ungafunda ukuthi ungakwenza kanjani ngesinyathelo ngesinyathelo esilula ozothola kuso Ungenziwa kanjani umgexo ngezimbali ezizwakala. Ubucwebe obulula.
Izimbali zingenye yalezo zandla ezizwakalayo ezilungele ukuhlobisa eminye imisebenzi yezandla esinayo ekhaya njengamabhokisi, amakhadi, amabhande asekhanda, njll. Akukaze kube buhlungu ukuba khona esesilungisiwe uma kwenzeka sidinga ukukusebenzisa ngokushesha ukuze sihlobise isipho okufanele sisinikeze omunye umuntu.
Inzuzo yokwenza lolu hlobo lwezandla ngemizwa ukuthi akuthathi izinto eziningi noma isikhathi ukuzenza. Imizwa ethile enemibala, isikelo, iglue, namatshe acwebezelayo okuhlobisa. Eposini Uzwe izimbali ukuhlobisa ubuciko bakho be-DIY.
I-brooch yezimbali ezwayo
I-Felt iyinto ewusizo kakhulu lapho wenza izesekeli ezingasetshenziswa ukuhlobisa ikhabethe lethu noma ezinye izesekeli. Lesi sikhathi ungasebenzisa imizwa ukwenza i-flirty i-brooch enezimbali Yini okufanele ugqoke phezu kwe-lapel yejazi lakho.
Ezinye zezinto ozozidinga ukwenza lo msebenzi wezandla yilezi: i-fewling enemibala, isikelo, iglue, noma i-brooch. Ezinye izisetshenziswa kanye nemiyalelo yokukwenza ungayithola kokuthunyelwe Izwa i-brooch yembali. Uzoyithanda!
Indlela yokwenza izimvemvane ezizwakala
I-Las izimvemvane Zibuye zihle kakhulu ukuzenza ngokuzizwa, noma ukuhlobisa izinto zasendlini ezifana namakhethini, imicamelo noma ama-cushions noma futhi ukuzinikeza njengesipho sokuhlobisa isipho sosuku lokuzalwa.
Le misebenzi yezandla ezwakele kulula kakhulu ukuyenza futhi ngeke udinge izinto eziningi. Vele uqoqe imizwa enemibala kanye nentambo, induku yokhuni, izinkinobho, amaribhoni namanzi. Ukuze ubone ukuthi kwenziwa kanjani ungachofoza Indlela yokwenza izimvemvane ezizwakala. Ngokubekezela okuncane bazobukeka bebahle kuwe!
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Ubuciko nezinto zokwakha » Imisebenzi yezandla » 15 imisebenzi yezandla emihle futhi elula ezwakala